Denizli Metropolitan waxay muhiimad weyn siisaa wasakhda safarka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliDenizli Metropolitan waxay muhiimad weyn siisaa wasakhda gaadiidka
26 / 03 / 2020 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, Gondola, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY, TELPHER
Magaalada weyn ee Deniz waxay siisaa ahmiyad weyn siinta jeermisyada gaadiidka
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay sii wadaysaa nadiifinta iyo si joogto ah u baabi'isaa dhammaan goobaha adeegga ee ka dhanka ah cudurka loo yaqaan 'coronavirus', iyadoo muwaadiniintu ay sheegeen inay aad ugu qanacsan yihiin tillaabooyinka la qaaday.
Halganka coronavirus-ka magaalo-weynu wuxuu u socdaa si aan kala go 'lahayn
Marka la eego baaxadda tallaabooyinka laga qaadayo coronavirus Denizli Metropolitan Municipal (Kovid-19), waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso nadaafadda iyo jeermisyada dhammaan goobaha adeegyada magaalooyinka sida basaska, basaska dowladda hoose, joogsiyada, jardiinooyinka, meelaha nasashada, xarumaha dhaqanka iyo bulshada, oo ay si weyn u adeegsadaan muwaadiniintu. Xaaladda guud, kooxaha ku lugta leh Deegaanka Denizli ee Ilaalinta Deegaanka iyo Waaxda Ilaalinta Deegaanka waxay sii wadaan daraasado ku saabsan jeermiska ka-hortagga ah ee alaabada ay ka kooban yihiin Wasaaradda Caafimaadka, Agaasinka Guud ee Caafimaadka Dadweynaha iyo goobaha adeegga magaalooyinka. Intaas waxaa sii dheer, kooxdu waxay ka wadaan howlo nadiifin deg-deg ah dhammaan dhismayaasha adeegga ee Degmooyinka Denizli ee Magaala Weyn, sida dab-damiyaasha, Xarunta Guryaha Xayawaanka iyo Xarunta Dhaqancelinta, Isboorti, tas-hiilaadka bulshada iyo dhaqanka.
Muhiimadda weyn waxay kuxirantahay jeermiska jeermiska
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Denizli wuxuu siiyaa ahmiyad weyn u leh ka-hortaga cudurka 'coronavirus' ee basaska magaalada ee u adeega magaalada. In kasta oo basaska loo raaco nadaafadda iyo hanaan-jeermiska ka-hor safarka, wadayaasha ayaa sidoo kale lagu qaadayaa baadhitaanno caafimaad oo aaladda ka-hortagga jeermiska lagu meeleeyaa gudaha baabuurta dhexdeeda. Tallaabooyinkaas ka sokow, waxaa la caddeeyay in awoodda rakaabka ee basaska degmadu hoos u dhacday isla markaana digniino laga soo saaray qaban-qaabada fadhiyada si looga hortago xidhiidhka ka dhexeeya rakaabku. Isuduwidda iyo kormeerka Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, jeermis-ka-qaadista ayaa sidoo kale lagu fuliyaa basaska rakaabka iyo basaska yar yar ee ka soo guuraya Denizli Metro Metroitan Bus Terminal ee degmooyinka.
Muwaadiniintu way ku qanacsan yihiin
Nihat Trigger: Waxaan u maleynayaa inay tahay shaqo aad u wanaagsan. Dawlada Hoose ee Magaalada ayaa buufisa, faafisa, meelwalbana ku qanacsan. Waxay tirtiraan xitaa ATM-yada waxayna ka dhigaan kuwo nadaafad leh. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo shaqaalaha oo dhan shaqadooda. Waxaan rabaa in waxbarashadu sidan ku sii socoto.
Arzu Karayazı: Shaqada ayaa aad u wanaagsan. Xaqiiqdii, aad ayaan ula yaabanahay in Denizli Dawlada Hoose ee Magaala Weyne ay sida ugu fiican ugudamayso xuquuqda shaqooyinka. Waxaan imid Denizli markii ugu horraysay qaab taxaddar leh. Waan jeclahay shaqooyinka aad iyo aad, hambalyo.
Ayşegül Cin: Waxaan ku noolahay Izmir. Shaqada laga qabtay Denizli waa mid aad u qurux badan oo lagu guuleystay. Waxaan rabnaa in daraasaddan lagu sameeyo magaalo kasta. Daraasadahaan waxaa loogu talagalay caafimaadkayaga. Waxaan rajeynayaa in sidan loo sii wado.
Ercan Dümen: Waxaan ogaaday tallaabooyinka iyo shaqooyinka ay qaaday Denizli Metropolitan Municipal ee ka dhanka ah coronavirus aad ayey u guuleysatay. Waxaa jira shaqooyin aad u wanaagsan. Waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa shaqadaada gargaarka ee waayeelkayada. Waxaan uga mahadcelineynaa Duqa Magaalada Cusmaan Cusmaan Zolan shaqadiisa, gadaal ayaan u taaganahay waana taageernaa howlahan.
Cusmaan Manay: Waxaan ahay arday dhigta Jaamacadda Pamukkale. Kala-goysyada ayaa muhiim noo ah. Waxaan ku jirnaa xilli adag. Qof walba waa inuu fiiro gaar ah u yeesho nadaafaddiisa, laakiin waxaan ugu hambalyeynayaa mas'uuliyadooda.
"Maalmahan waxaan uga badbaadin doonaa midnimo iyo wada jir"
Duqa Magaalada Denizli Osman Zolan ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah coronavirus iyadoon loo eegeynin saacadaha shaqada oo ay qaadaan talaabooyin badan oo dheeri ah. Isagoo carrabka ku adkeeyay inaysan muwaadiniintu ka bixi karin guriga aysan qasab ahayn, Duqa Cusmaan Zolan ayaa yiri, "Maadaama aan nahay Dowlada Hoose, waxaan sii wadaynaa nadiifinta iyo jeermis-ka-shaqeynta dhammaan goobaha adeegga. Waxaan sii wadaynaa inaan u shaqeyno caafimaadka muwaadiniintayada annagoo qaadanayna dhammaan tallaabooyinka nagu dhaca. Muwaadiniintayada fadlan tixgalinta dhammaan digniinta. Waxaan aaminsanahay inaan maalmahan ku noolaan doonno midnimo iyo wadajirin. ” Isagoo cadeeyay inay u keeneen basaska magaalada bilaashka ah farmashiyeyaasha iyo farmashiistayaasha iyo sidoo kale shaqaalaha daryeelka caafimaadka, Duqa magaalada Zolan ayaa u mahadceliyay dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ka shaqeynaya dadaal weyn isla markaana u rajeeyay wanaag sida ugu wanaagsan.
ERC GmbH, Turkey siinayaa muhiimadda ugu weyn ee gaadiidka Tareenka ee
Xilliga Gaadiidka Gaadiidka
Muddada aamusnaanta ah ayaa ka bilaabma gaadiidka
Muddada cusub ee gaadiidka dadweynaha ee Bursa
Xarunta Palandoken Ski waxay bixisaa adeeg weyn
Recep Altepe Yıldırım wuxuu xasuusiyay in saldhigyada haray in laqaban doono
Terminal Baska Denizli